I-Green Gables - I-Airbnb
Bright, Victoria, i-Australia
Indlu encane ibungazwe ngu-Gay
U-Gay Ungumbungazi ovelele
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Jul 27.
IGreen Gables iyindlwana enokuthula etholakala ezingadini eziluhlaza osebeni lomfula i-Ovens eBright.
I-Murray to Mountains Rail Trail iseduze kweminyango yethu iyenza ibe indawo ekahle yokuphumula imilenze yakho ekhathele ngemva kosuku emikhondweni!
Ukusuka eGreen Gables, kuwuhambo olulula, ukugibela noma ukushayela elokishini laseBright elinezitolo zalo zezitolo nezindawo zokudlela, imikhosi evamile kanye nesitayela esihle sezwe sase-Europe konke okubekwe phansi kwezintaba ze-Victorian Alps.
Ikotishi liyisitayela seTudor ngaphandle futhi linendawo yangaphakathi elungiswe kahle ngesitayela sesimanje se-alpine.
Ikhishi elisha linesitofu, i-microwave oven, usinki nesiqandisi.
Kukhona usofa othokomele kanye ne-TV egumbini lokuhlala elivulela ingadi enhle ngeminyango egoqeke kabili khona kanye endaweni yokuhlala. Ngisho noma kumakhaza ngaphandle, ukubukwa kusazobukeka kuhle noma ngabe isizini.
Idekhi engaphandle kwegumbi lokuphumula ilungele ukubuka izinyoni noma ukudla isidlo sasekuseni ngenkathi ulalele umfula.
Igumbi lokulala eliphezulu liyindlela yokubalekela enokuthula ngaphansi kophahla olucijile elinombono wezinyoni phakathi kwezihlahla nangaphandle kwengadi. Kukhona iwindi elikhulu lesithombe elinombhede wasemini othokomele ongahlala kuwo futhi ufunde noma uvele uphuphe ntambama ungekho. Umbhede uyindlovukazi ethokomele ongase ungafuni ukuyishiya.
Kunenja enobungane uGillie ehlala kule ndawo. Uthanda ama-pats!
ubusuku obungu-7 e- Bright
I-Bright idume ngamakhefi, izindawo zokudlela kanye nezitolo ze-boutique. Kuhlezi kukhona okwenzekayo kuQhakazile nasezindaweni ezizungezile. Izihlahla ezivuthulukayo kanye nokubukwa kwezintaba kuyenza ibe yindawo edumile abantu ababuya kuyo izikhathi ngezikhathi.
Izindawo zokungcebeleka eqhweni i-Falls Creek kanye ne-Mt Hotham zifinyeleleka e-Green Gables Cottage noma i-Mt Buffalo iwuhambo olufushane lokuyodlala iqhwa.
I-Mountain Biking isiphenduke intandokazi yezivakashi nabantu bendawo e-Bright nge-Mystic Bike Park egcina ukudonsa kwe-adrenaline!
I-Ovens River igeleza ngqo ngemuva kweGreen Gables futhi iyindawo enhle yokupholisa umoya noma uzame isandla sakho ekudobeni.
UGay noRob bahlala kule ndawo endlini ehlukene. Bazotholakala ukuthi baxhumane nabo ngenkathi usahlala uma kudingeka.
UGay Ungumbungazi ovelele